Goobaha lagu kulmo -
Degmooyinku waxay leeyihiin goobo lagu kulmo dhamaan qoysaskuna ku kulmi karaan, iska wareystaan xaaladaha mololeed iyo inaad ka hesho howlaha qibrad waddaaga. Carruurtu ciyaarahooda iyo howlo barbaarintooda ah. Barnaamijyada ay qabtaana waa mid ka turjumeysa rajada iyo baahida qoysaska. Goobtaas la kulmana haddii walbahaar jiro waad la waddaagi kartaa waxaanad heleysaa caawimo.
Goobaha lagu kulmo waxaa ka howlgala sida hay’adaha, mowlac masiixiyeedka iyo urur diimeedyada kale iyo degmada barbaarinta cid walba u furan.
Weydii degmadaada goobaha lagu kulmo ee qoysaska sida rugta dhalaanka iyo hooyooyinka, xannaanada, mowlac masiixiyeedka iyo urur diimeedyada.